Canonical inodonhedza mamwe 32-bit mapakeji muUbuntu 20.xx: Nhau dzakanaka dzevatambi | Linux Vakapindwa muropa
Canonical inodonhedza 32-bit mapakeji muUbuntu 20.xx: Nhau dzakanaka dzevatambi
Canoncial yakati yaizobvisa rutsigiro rwema 32-bit mapakeji pane yayo Ubuntu, asi nharaunda yakazosvika pazviri zvishoma nekuti paive kuchine vazhinji vashandisi vanovimba nemhando idzi dzemapakeji. Ichokwadi kuti ndiyo tsika yevakawanda vanogadzira, kusiya mapakeji ekare kuti vatarise zvinoitwa neazvino. Asi iyo 32-bit inoita kunge ichave yakaoma kukanganwa ...
Mushure mekunyunyuta, Canonical akafungisisa uye akati yaizodonhedzera rutsigiro paUbuntu 19.xx uye kuti yaizoibvisa muUbuntu 20.xx. Mushure meiyi truce diki kana kunonoka kumiswa kwemhando idzi dzemapakeji, ikozvino zvinoita sekuti Canonical inozvitora zvakadzikama uye ichasiya mamwe 32-bit mapakeji kunyangwe muUbuntu 20 nekupfuura. Vamwe vakaita saValve vakati kana vakasachengeta rutsigiro vaizosiya chikuva, uye nyika yekutamba ichiri kutsamira pane izvi mumitambo mizhinji yakare.
Iye zvino zvinozivikanwa kuti muUbuntu 20.04 kuchange kuine makumi matatu nematatu mapakeji, asi richava rakati pfupike runyorwa, zvichisiya izvo zvakasiiwa zvisina gadziriso uye zvinogona kukonzera kuchengetedzeka uye kugadzikana nyaya yeiyo distro. Ndokunge, kana iwe uchichengeta mapakeji achifara kune vashandisi vazhinji, asi iwe zvakare unogadzira mamwe matambudziko. Midziyo yaigona kugadzirisa zvishoma nezvishoma aya matambudziko. Ndinovimba kurerutsa kwakanaka kunowanikwa.
Kana iwe uchida ona runyorwa ruzere rwe 32-bit mapakeji izvo zvichave zviripo unogona kuzviona pano. Asi ini ndave kutofungidzira kuti vatambi vane mhanza. Nyika yekutamba icharamba iine mapakeji senge Unity uye Godot maginjini enjini, mamwe madhiraivha, uye zvakare SDL 2, Waini, DXVK, Steam, MESA mapakeji, nezvimwe. Ndokunge, mazhinji emapakeji akaomarara ayo vazhinji vaitya.
Zvichakukanganisa sei? Chokwadi ndechekuti kana iwe uine komputa ine 64-bit chip uye iwe usiri kunyanya kutsamira pane iyo software, hazvizokubate iwe zvachose. Kana iwe uchitsamira pa 32-bit package iyo isina kunyorwa, funga kutsvaga 64-bit imwe nzira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Canonical inodonhedza 32-bit mapakeji muUbuntu 20.xx: Nhau dzakanaka dzevatambi
Microsoft yakaburitsa yakajairwa C ++ raibhurari kodhi iri muVisual Studio
Firefox ichakurumidza kuburitswa pamwedzi